GIMP 3.0 inosvika pasina kutanga rutsigiro rweGTK 4.0 | Linux Vakapindwa muropa
GIMP 2.10.22 ikozvino inowanikwa yeMacOS, uye GIMP 3.0 ichagara isina rutsigiro rweGTK 4.0
Kunyangwe Photoshop inowanikwa muMacOS, chokwadi ndechekuti iri software inobhadharwa inobhadharwa, uye pachangu ndiri mushandisi asingade shanduko zvakanyanya, saka kana ndikashandisa GIMP paLinux neWindows, ndinodawo kuishandisa pane yangu yekare iMac. Kusvikira svondo rapfuura, iyo vhezheni yeGIMP yemacOS yakanga iri yekare, asi ivo vakatogadziridza kune yazvino vhezheni. Pamusoro peizvozvo, chirongwa ichi chinoramba chichienderera mberi GIMP 3.0.
Maawa mashoma apfuura vakazivisa kuburitswa kweGIMP 2.99.4, inova itsva yekuvandudza vhezheni yeGIMP 3.0. Izvo zvinouya nezvinhu zvakawanda zvitsva, zvaunazvo uine pfupiso pazasi pemitsara iyi, asi pachako zvavanotaura muchikamu chavo "zviri kuuya" zvinondibata, kunyanya izvo haigamuchire GTK 4.0 kunze kwebhokisi. Isu tinorangarira kuti iyo nyowani vhezheni yeGTK iri inowanikwa kweinopfuura vhiki chete, asi timu yekusimudzira yeGIMP ikozvino yatarisa pane zvimwe zvinhu, uye GTK 3.0 icharamba ichitsigirwa kwenguva yakakwana kuti shanduko igare yakachengeteka.
1 Chii chitsva mune yazvino GIMP 3.0 beta
2 Pasina GTK 4.0… kutanga
Chii chitsva mune yazvino GIMP 3.0 beta
Izvo iwe zvauinazvo pazasi irwo rwakapfupiswa runyorwa rwezvavakaburitsa mukati Iyi link:
Kugadziriswa kwekugadzirisa munzvimbo dzakasiyana dzeGIMP.
Chishandiso chitsva chepende pasiti yekutamba.
Chizvarwa chitsva che generic dialog uye metadata rutsigiro API rwekunze plugins.
Yakawanda-yakasungwa JPEG2000 kududzira.
Pakutanga zvinyorwa pane plugin inofamba kuenda ku3.0.
Rova zvakasimba Widget.
Input zvishandiso dialog.
Yakagadziriswa default zvishandiso.
Iwo madiki akagadziriswa eKorea neJapanese,
Chishandiso chitsva chekuyedza chekusarudza pendi.
Kuzvarwa kwema dialogs ema plugins.
Generic metadata tsigiro.
Yakagadziridzwa faira plugins
Zvakawanda-zvakaiswa marongero anowanikwa kubva kuma plugins.
Yakagadziriswa plugin debugging.
babl 0.1.84 uye GEGL 0.4.28.
Izvo hazvizoite kutamira kuGTK 4.0 kutanga.
Pasina GTK 4.0… kutanga
Iyo yekupedzisira poindi pane yapfuura runyorwa haisi chitsva, asi kusavapo. Asi hazvizove zvakakosha zvakanyanya kana tikafunga zvavanotaura panguva iyoyo:
Oo, uye chinhu chekupedzisira. Isu tinoziva kuti GTK 4.0 yatovepo, hatina hurongwa hwekuchichinja pasati pasunungurwa GIMP 3.0.
Izvo zvinonzwisiswa kuti chirongwa ichi chakanangiswa pane izvo zvavanotova nazvo, uye kuti GIMP 3.0 ichaendeswa kuGTK 4.0 mune ramangwana gadziriso. Chero zvazvingaitika, pane maviri anovandudzwa kubva svondo rino: iyo nyowani ye macOS uye yazvino beta, chaizvo imwe isingasvike Apple zvigadzirwa. Uye kutaura nezvemakomputa emakomputa, GIMP 2.10.22 haitsigire zviri pamutemo Bug Sur, asi inoshanda. Haimbonaya kune wese munhu sezvaanofarira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GIMP 2.10.22 ikozvino inowanikwa yeMacOS, uye GIMP 3.0 ichagara isina rutsigiro rweGTK 4.0
GNUSim8085 - 8085 Microprocessor Simulator
Kuita nevakomana. Kugadzira maavatatisi eKisimusi neInkscape